Tamarta dib loogu cusboonaysiin karo Spain. Muuqaalka Tamarta 2018 | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tamarta la cusboonaysiin karo ee Isbaanishka ayaa siinaysa, waqti ka dib, kor u kaca iyo hoos u dhaca ku yimid isticmaalka iyo wax soo saarka. Waqtigaan la joogo, midkoodna tamarta nukliyeerka, dhirta wareegga la isku daray, ama xitaa dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee muddada dheer la sugayay ayaan awood u yeelan inay soo saaraan tamar aad u badan sida dib-u-cusbooneysiinta sanadkii la soo dhaafay. Sida laga soo xigtay Shabakadda Korontada Isbaanishka, ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee laga soo saaray 2017 waxay soo saareen 33,7% dhammaan tamarta la cunay.
Qoraalkan waxaad ku ogaan doontaa jaangooyada tamarta la cusboonaysiin karo ee Isbaanishka, laga bilaabo sida ay u shaqeeyaan kan ugu isticmaalka badan. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato?
1 Tamar badan oo dib loo cusboonaysiin karo gudaha Spain
2 Tamarta caadiga ah iyo kharashkooda badan
3 Maxay Spain ku sameyneysaa tamar?
4 Fursad dib loo cusboonaysiin karo
5 Isku darka tamarta Isbaanishka
Tamar badan oo dib loo cusboonaysiin karo gudaha Spain
In kasta oo xaqiiqda ah in tamarta la cusboonaysiin karaa ay si fiican u jiidatay Jasiiradda Iberian, haddana 17,4% tamarta la isticmaalay weli waxaa sabab u ah dhirta kuleylka kuleylka ah. Mid ka mid ah seddexdii kilowatt ee saacadood ee kasta oo laga soo saaro Isbaanishka ayaa si iskiis ah oo nadiif ah u soo saaray. Tamarta ugu badan ee la isticmaalo waxaan ka helnaa qoraxda, dabaysha, biyaha iyo biomass.
In kasta oo biyaha, qorraxda iyo dabaysha loo adeegsado in lagu soo saaro tamar baaxad weyn leh, biomass ayaa loo isticmaalay in lagu kululeeyo dhismayaasha xilliga qaboobaha. Thanks to ilahaan dib loo cusbooneysiin karo waa la quudin karaa shooladaha pellet.
Tamarta caadiga ah iyo kharashkooda badan
Inta hartay saacadaha kilowatt waxaa lagu soo saaraa gaaska dabiiciga, dhuxusha ama dhirta tamarta nukliyeerka. Tamarradan ma aha kuwa asaliga ah, maadaama, tusaale ahaan, ku dhowaad 50% yuraaniyamku muhiim u yahay Namibia ama Niger. Halkaas ayaan ka helnaa shidaalka dhirteenna tamarta nukliyeerka. Dhinaca kale, Qatar ama Aljeeriya waxaan ka soo degnaa kalabar gaaska dabiiciga ah ee aan isticmaalno. Ugu dambeyntiina, waxaan ka soo saarnaa shidaal aad u tiro badan Liibiya, Nigeria iyo Bariga Dhexe.
Asalka dibedda ee tamarta micnaheedu waa in dakhligu uusan aadin Isbaanish, laakiin uu dibedda joogo. Dhaqaalaha Isbaanishka wuxuu shaqeeyaa hadii lacag ay ku shubato wadanka gudihiisa. Taasi waa, haddii aan dhoofno wax ka badan inta aan soo dhoofsanno ama helno dalxiisayaal badan oo halkan lacagtooda ku qaata. Dhammaan waxyaabaha la soo dejiyo waxay leeyihiin qiimo: 33 milyan oo yuuro oo ku baxday saliidda, gaaska iyo dhuxusha. Lacagtaan ayaa ka luntay qasnadaha Isbaanishka waxaana loo aaday dalal kale.
Xaaladdaan soo wajahday, Isbaanishku waxay ku tiirsan tahay gebi ahaanba qiimaha ay dalal kale u dejiyeen gaaska dabiiciga ama saliidda. Ku tiirsanaanta tamarta ayaa ka sarreysa celceliska Yurub. Dalal yar ayaa gebi ahaanba ismaamula xagga tamarta, laakiin Isbaanishku wuxuu aad ugu tiirsan yahay tamarta dibadda. Waxaan u nugul nahay damaca ummadaha kale ee tamarta naga iibiya iyo suuqaas "kali-talisnimo".
Dhibaatada ku tiirsanaanta tamarta ayaa ka sii daraysa marba marka ka dambeysa. Sida ku cad war bixintii ugu dambaysay ee Cores (Hay'ad Keyd Istaraatiijiyadeed ee Wax soo saarka Batroolka, Wasaaradda Tamarta), intii u dhaxeysay Janaayo iyo Oktoobar 2017, soo dejinta wax soo saarka tamarta ayaa halkan ku koray 18,0%. Iyada oo ay taasi jirto, yaraanta tamarta ayaa korortay 30,4%, oo u dhiganta 17 milyan oo yuuro. Waxaan haysanaa hoos u dhac weyn oo xagga tamarta ah, markaan awood weyn ku leenahay adduunka dib-u-cusbooneysiinta.
Maxay Spain ku sameyneysaa tamar?
Iyada oo tamarta aad iibsato, waxay soo saartaa qabow iyo kuleyl labadaba howlaha warshadaha. Waxay sidoo kale u adeegaan guryaha iyo xafiisyada qaboojiyaha leh. Waa in xisaabta lagu darsadaa in saliida loo isticmaalo in lagu quudiyo gebi ahaan gawaarida wareegga ku jira (in ka badan 27 milyan oo gaadiidka dhulka ah oo lagu daray gaadiidka hawada iyo badda). Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu soo saaro koronto. Soo saarista Tamarta waxaan ku jirnay badnaan illaa sannad ku dhowaad, markii isku dheelitirka u dhexeeya dhoofinta iyo soo dejintu ay fiicnaayeen.
Ka dib saddex iyo toban sano oo isku dheelitirnaan wanaagsan ah, oo leh shan sano oo isku xigta iyo joojinta dib-u-cusboonaysiinta gacanta dawladda Rajoy, sanadkii 2016 hoos u dhaca tamarta ayaa ka bilaabmay Spain. U janjeera inay ka sii darto ayaa la xaqiijiyay 2017, markii aan soo galnay 20% tamar ka badan tii 2016. Inkasta oo Faransiiska iyo Portugal ay sidoo kale ku jiraan isku dheelitirnaan xun, kan dambe wuxuu leeyahay sharci aad u firfircoon is-isticmaalka suuqa.
Fursad dib loo cusboonaysiin karo
Isbaanishka wuxuu leeyahay qiyamka shucaaca ee ugu sareeya Yurub oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan leenahay inta ugu badan dalxiisayaasha taariikhda waxaana ku noolaanay bilaha Ogosto heerkulkeedu yahay 45 darajo. Iyada oo ay taasi jirto, ku tiirsanaantayada tamarta ayaa sii kordheysa. Waxaan haysanaa ilo badan oo Spain ah iyo daaqad weyn oo fursado ah. Qaboojiyaha la isticmaalo inta lagu jiro saacadaha ugu sarreysa waxaa ku shaqeyn kara qorraxda. Qorraxdu waxay noqon kartaa mid aan saamixin oo daallan sida ay ugu deeqdo tamar. Laakiin sidaas may ahayn. Iibiyeyaasha dibedda ayaa ka faa'iideystay meelaha ugu sarreeya tamarta, inta badan kuwa gaaska dabiiciga ah.
In kasta oo duruufaha tamarta leh ee aan maalin kasta ku nool nahay Isbaanishka, baarkinka la cusboonaysiin karo ee la rakibay uu macnaheedu yahay inaan heli karno 1 kiilo 3 kiiloowt oo tamar nadiif ah. Tani waa guul la tixgelinayo xaaladaha tamarta leh ee aan ku jirno. Ma jiraan wax intaa ka badan oo aan ka yarayn 33,7% dhammaan tamarta waxaa soo saaray ilaha aan wasakheyn iyo kuwa asaliga ah.
Isku darka tamarta Isbaanishka
Dhinaca kale, toddobada mishiinka nukliyeerka ee wali shaqeeya ayaa mas'uul ka ahaa soo saarista 22,6% ee kiilow. Tani waxay ka dhigan tahay in walaxda laga keenay Namibia ay qaadatay qeybta labaad ee wax soo saarka. Gaas wuxuu soo saaray wax kabadan ama kayar lamid ah, hadii aan kudarayno isku darka wareega, 13,8%, iyo 11,5 dhibcaha wada noolaanshaha. Inta badan xarumaha isukeenista ee Isbaanishka waxay ku shaqeeyaan gaaska. Dhuxulku wuxuu soo saaray oo keliya 17,4% ee saacadaha kilowatt.
Sida laga arki karo iskudhafka tamarta Isbaanishka, in kasta oo xaqiiqda ah in dib u cusbooneysiinta ay la kulantay joogsasho tan iyo markii ay jirtay dowladdii Rajoy, haddana waxay dhaafeen kuwa kale. Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Isbaanishka waa inay u horseedaan dalka kala-guurka tamarta tan iyo, goor dhow ama goor dambe, shidaalka foosha ayaa qaali noqon doona sababtoo ah xaalufintooda. Waxaan rajeyneynaa in dowladaha ay la shaqeyn doonaan. Waa wax laga xishoodo in tamar badan la lumiyo, in kasta oo ay leedahay awood weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta dib loogu cusboonaysiin karo Spain
Waa maxay hawlgalku sidee buu muhiim u yahay?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato mitirka korantada